I-Ardublock: iyini nokuthi ingayenzani nge-Arduino yakho | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Ukutholwa kwamabhodi e-Arduino kuyinto ephelelwe yisikhathi futhi eqhubeka nokufinyelelwa ngamaphakethe amaningi, kepha kusebenza kanjani? Kuyacaca ukuthi ukuze lisebenze sidinga ikhodi noma uhlelo olwenza umsebenzi esiwufunayo. Lokhu, ngeshwa, akutholakali kuwo wonke umuntu futhi kutholakala udinga ulwazi lohlelo ukwenza i-Arduino ihambise imoto noma ikhanyise ilambu.
Konke lokhu kwenze abahleli ababukwayo nezinhlelo ezibukwayo zathandwa kakhulu. Lolu hlobo izinhlelo zikuvumela ukuthi wakhe izinhlelo ngamabhulokhi ahudulwa negundane, ukukhohlwa ukuvala ama-brace curly noma ukubhala amagama omsebenzi omude. Ithuluzi elidumile elethula izinhlelo ezibukwayo kwi-Arduino ibizwa nge-Ardublock.
1 Kuyini i-Ardublock?
2 Ungayifaka kanjani i-Ardublock ohlelweni lwethu lokusebenza?
2.1 Ukulungiselela ikhompyutha yethu
2.2 Ukufakwa kwe-Ardublock
3 Ezinye izindlela ze-Ardublock
I-Ardublock wuhlelo noma kunalokho umphelelisi we-Arduino IDE esivumela ukuthi sakhe izinhlelo nekhodi ngaphandle kwesidingo sokubhala ikhodi, okungukuthi, ngamathuluzi okubuka. Lokhu kunezinzuzo zako ngoba uma sikwazi ukwenza uhlelo, sizokonga isikhathi esiningi kunqubo yokulungisa iphutha ngoba ngeke sikhohlwe ukubhala okwaziwayo ";" futhi ayivali izinsimbi zekhodi. Ukuhlela ngamathuluzi abonakalayo ukuhlela enzelwe bobabili novice nochwepheshe bohlelo futhi nakubasebenzisi abangazi ukuthi bangahlela kanjani futhi bafuna ukufunda ukuthi bangakwenza kanjani.
Njengoba sishilo, i-Ardublock ingumphelelisi ngaphezu kohlelo uqobo ngoba kuyadingeka ukuthi ube ne-Arduino IDE yokusebenza kwayo. Ngakho-ke, ukwenza isifinyezo, singasho ukuthi i-Ardublock ukwenza ngokwezifiso i-Arduino IDE ukuvumelanisa uhlelo lwekhodi nohlelo olubukwayo.
I-Ardublock inezinto ezinhle ngokwengeziwe ngaphandle kokuba ithuluzi lohlelo lwe-novice. Enye yezinto zayo ezinhle kungenzeka sebenza ngamabhulokhi ukwakha amaphrojekthi ngokushesha.
I-Ardublock isebenza ngokubonakalayo ngamabhulokhi futhi ingasebenza nezakhi. Ngakho-ke, singakha ibhulokhi engamasondo, enye ingumculo nenye eyipuleti; ngaso sonke isikhathi lapho sifuna ukusebenzisa la mabhulokhi sizoqamba amagama noma simane sihudule sisuka kolunye uhlangothi lwewindi siye kolunye uhlangothi lwewindi.
Imisebenzi kanye namathuba asinikezwa yi-Ardublock kuyafana nalokho okusinikezwa i-Arduino IDE, okungukuthi, singaxhuma i-Ardublock ebhodini lethu le-Arduino, sithumele ikhodi u-Ardublock ayenzile ngenxa yamabhulokhi futhi ahlole amaphrojekthi ethu ngokushesha futhi kalula. Futhi ukuthi lapho siqeda uhlelo, imininingwane egciniwe iseyikhodi ebhaliwe, ikhodi eyenziwe ngu-Ardublock ngamabhulokhi ethu.
Ungayifaka kanjani i-Ardublock ohlelweni lwethu lokusebenza?
Yebo, sesivele sazi noma sinombono ocacile wokuthi iyini i-Ardublock, kepha ifakwa kanjani kwikhompyutha yethu? Singayisebenzisa kanjani?
Ukulungiselela ikhompyutha yethu
Yize imibhalo okuwukuphela kwayo ekhona nge-Ardublock ingesiNgisi, iqiniso ukuthi inqubo yokufaka ilula futhi iyashesha uma sine-Arduino IDE. Okokuqala kufanele unayo kukhompyutha yethu ye-Arduino IDE, uma singenayo efakiwe, ungama ubone lapha ungayifaka kanjani ku-Gnu / Linux. Enye into esizodinga ukuthi ube nomshini obonakalayo weJava noma okufanayo eqenjini. Uma sisebenzisa i-Gnu / Linux, okuhle ukubheja I-OpenJDK, ikakhulukazi ngemuva kwengxabano phakathi kwe-Oracle neGoogle. Manje njengoba sesenze konke, kufanele siye iwebhusayithi esemthethweni ye-Ardublock bese uthola iphakethe le-Ardublock, iphakethe elikufomethi yeJava noma nge-extension .jar. Ifayela elilandiwe akulona ifayela elisebenzisekayo elines wizadi sokufaka, ngakho-ke kufanele sikwenze konke ngesandla.
Okokuqala Sivula i-Arduino IDE bese siya kokuncamelayo noma kokuncamelayo. Manje siya enkethweni "Indawo yeSketchbook:" ezovela ewindini elisha. Leli ikheli lapho kuzodingeka sigcine ama-plugins athile noma izakhi ze-Arduino IDE. Indawo noma ikheli elivelayo lizoba yinto efana ne- "Documents / Arduino" noma ikhaya / Imibhalo / i-Arduino. Singalishintsha ikheli kepha uma siliguqula kufanele sazi ukuthi yiliphi ikheli elisha lokuhambisa ifayela le-Ardublock elilandiwe lapho. Uma sivula ifolda ye-Arduino sizobona ukuthi kukhona amanye amafolda namafayela.
Kufanele sihambise iphakethe le-Ardublock sishiya ikheli elilandelayo "amathuluzi / i-ArduBlockTool / ithuluzi / i-ardublock-all.jar". Uma sinohlelo lwe-Arduino IDE oluvulekile, sekuyisikhathi sokuluvala futhi lapho siluvula futhi, ngaphakathi kwemenyu yamathuluzi noma yamathuluzi inketho ye-Ardublock izovela. Ukuchofoza kuyo kuzokhipha iwindi elisha elihambisana nesibonisi se-Ardublock. Njengoba ukwazi ukubona, kuyinto elula futhi esheshayo kepha edidayo uma singayazi inqubo yokufaka.
Ezinye izindlela ze-Ardublock
Yize i-Ardublock ingahle ibonakale iyintsha futhi ihlukile ku-Arduino, iqiniso ukuthi akuyona uhlelo noma ithuluzi kuphela okufanele senze uhlelo olubukwayo. Kunamathuluzi amaningana agxila ezinhlelweni ezibukwayo, kangangoba zonke ezinye izindlela ezikhona ze-Ardublock yizinhlelo ezihlukile hhayi izandiso noma ama-plugins ku-Arduino IDE.
Eyokuqala yalezi ezinye izindlela ibizwa ngeMinibloq. IMinibloq wuhlelo oluphelele olugxile ezinhlelweni ezibukwayoNgakho-ke, isikrini sayo sihlukaniswe izingxenye ezintathu: ingxenye enamabhulokhi azokwakhiwa, enye ingxenye lapho sizohambisa khona amabhlogo esifuna ukuwasebenzisa ohlelweni nengxenye yesithathu ezokhombisa ikhodi esizoyakha, ngoba abasebenzisi abaphambili kakhulu. IMinibloq ingatholakala ngalokhu isixhumanisi.
Ithuluzi lesibili libizwa Hlwaya i-Arduino. Leli thuluzi liyazama guqula uhlelo lwezingane lweScratch kunoma iliphi izinga futhi ngefilosofi efanayo dala izinhlelo. IScratch ye-Arduino wuhlelo oluphelele, okungukuthi, imfoloko yeScratch.
Okwesithathu kwamathuluzi akukasungulwa kahle okwamanje, kepha kuyithuluzi elithembisayo ngaphakathi kwamathuluzi wokuhlela okubukwayo. Leli thuluzi libizwa I-Modkit, ithuluzi eyazalwa kuKickstarter kepha ikhula kancane ngendlela enhle kakhulu. Umehluko kwezinye izinhlelo unga ikhethekile kakhulu kubasebenzisi be-novice kunabasebenzisi abaphambili. Ekugcineni, enye indlela eya ku-Ardublock kungaba ukusetshenziswa kwendabuko kwe-Arduino IDE, enye indlela engabonakali futhi ezotholakala kuphela kubahleli bochwepheshe kakhulu.
I-Ardublock kuyithuluzi elithandeka kakhulu, okungenani kubasebenzisi be-novice. Kepha kuyiqiniso ukuthi uma ungumqambi wochwepheshe, lezi zinhlobo zamathuluzi ayenzi ikhodi ukuthi idalwe ngokushesha kepha okuphambene nalokho. Ukusebenzisa igundane, ngokungajwayelekile, kuhamba kancane kunokusebenzisa ikhibhodi.
Noma kunjalo uma singabahlelo abangenalwazi noma sifunda, i-Ardublock isandiso esinconywe kakhulu ukungasho ukuthi kubalulekile ngoba kulezi zigaba akunakugwenywa ukwenza amaphutha we-syntax nezinkinga ezincane okunzima ukuzithola nokuzinqoba nge-Ardublock. Noma kunjalo Ukhetha ini?
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » I-Ardublock: Kuyini Futhi Yini Ongayenza Ku-Arduino Yakho
Oscar Mansila kusho
Sawubona, ngiyajabula ukukwazi. Ngabe i-Ardublock isebenza ngezinhlobo ezintsha ze-Arduino?
Phendula u-Oscar Mansila
Sawubona, Ngalezi zinguqulo zemifanekiso ungathuthukisa izinhlelo ezifanayo nokubhala? Ngamanye amagama, ingabe yonke ikhodi ebhaliwe ingenziwa ngamabhulokhi?
Omunye umbuzo, uwuchaza kanjani noma usebenzise i .h, ama-subroutines njll. esimweni esinjalo?